काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले फेरि केपी ओलीसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र चुनौति विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफूलाई कतिपयले फेरि ओलीसँग मिल्नसक्ने आशंका गरेको तर त्यसको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका हुन्।
‘कतिपयको मनमा आशंका छ, कतै यिनीहरु फेरि मिल्ने त होइनन् ? हामी सबै अप्ठेरोमा पर्ने त होइनौं ? तर, ढुक्क हुनुहोस्, यसको कुनै सम्भावना छैन,’ नेता नेपालले भने, ‘केपी ओलीजी भाँचिन तयार हुनुहुन्छ, झुक्न तयार हुनुहुन्न। केपी ओली भनेको दम्भको एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँ अहंकारको अर्को संस्करण हुनुहुन्छ। सत्ताको दुरूपयोग गर्ने उहाँको निरंकुश प्रवृत्तिले गर्दा उहाँलाई यो ठाउँमा पुर्‍याएको हो।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘आफू नै राष्ट्र हुँ’ भन्ने सोचका कारण समस्या उब्जिएको पनि बताए। ‘‘आइ एम द स्टेट’, ‘आइ एम द पार्टी एण्ड एभब द पार्टी’, ‘आइ एम एभब द ल’ भन्ने मानसिकताले उहाँलाई यो ठाउँमा पुर्‍याएको हो। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले छुट दिने हो भने यो देशमा फेरि यस्तै प्रवृत्तिको व्यक्ति जन्मिनेछन्,’ नेता नेपालले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाको बिभाजनको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला नेपालको यस्तो धारणा आएको हो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि ओलीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै नेपालले आफूहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न चाहेको बताएका हुन्।
Tagsकेपी शर्मा ओली माधव नेपाल